1. Thina Uyi umklami professional futhi nomkhiqizi ezihlukahlukene isihlungi core endaweni yokukhanda.
inkampani 2.Our has eminingi ukukhiqizwa nokuthuthukiswa 20, ekhishwa isihlungi izakhi zezimboni ongafinyelela amayunithi 2000 ngosuku.
3.With imishini zesimanje zokukhiqiza, ngaphansi kwesisekelo ukwenza nangokuzithandela, siwenza ukuhlanganisa izinga okusezingeni eliphezulu izisetshenziswa, e eluhlaza izinto zokuthenga, ukukhiqizwa ukucutshungulwa kanye nekhwalithi kokuqendwa ukwamukelwa umkhiqizo isixhumanisi ukwenza Kuhlangana nekhono, ngaphansi kwesisekelo imikhiqizo izinga isiqinisekiso, ukuqinisekisa okufika ngesikhathi ukulethwa, zingakhiqiza amakhasimende ngamanani ukuncintisana kakhulu.
imikhiqizo 4.Our ngokuqhubekayo ukuqamba, imikhiqizo emisha kukhona emashalofini, imikhiqizo eminingi ashisayo atholakala kumakhasimende ongakhetha kuzo izidingo ezahlukene, Online impendulo esifike ngesikhathi, zokuxhumana ku-inthanethi, futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze sifake kahle amakhasimende.
5.Provide umkhiqizo iphakethe ngokuvumelana nemfuneko yekhasimende, nikela umkhiqizo inkonzo amakhasimende.
Inkampani 6.Our Ubuye has a eliphezulu yokuthengisa ithimba, Logistics team futhi imibhalo, thina ezingxoxweni ukuhweba, oda ngasekupheleni kokulandela kanye Logistics zokuthutha isixhumanisi ukuze bakwazi ukuphumelelisa docking nekhono, ukunikeza amakhasimende the best quality yesevisi oda ukufeza.